Canary Islands Part Part 1 iyo Qeybta 2
Su'aal Canary Islands Part Part 1 iyo Qeybta 2
Bilood 3 2 todobaad ka hor #1421 by Sambrook
Isku dayga in la rakibo muuqaalka maaddada iyo illaa iyo inta aan sheegi karo waxaan raacay tilmaamaha laakiin FSX ma soo bandhigayo muuqaalka. Waxa kaliya ee aanan sameyn waa waa inaad aqrisaa faylalka ii aqri. Waxay ku qoran yihiin Isbaanish. Waan la qabsan karaa afka Jarmalka laakiin luqadda Isbaanishka ayaa aniga iga lumaysa, marka laga reebo ke pasa. Caawinaad kasta waa laga mahadcelin doonaa.
Dad badan ayaa mahad leh.
Bilood 2 6 maalmood ka hor #1442 by nincol
Waxaan kugula talinaynaa inaad isku daydo inaad booqato meeshan ku taala Spain oo ku taal Canary Island. Waxaa la yiraahdaa Gran Canaria waana qasab ku soo booqashada Spain. Aniga iyo saaxiibaday ayaa duullimaad u duulay dalka Spain oo ma harin wax daqiiqado ah si ay u soo booqdaan jasiiraddan. Waa inaad iska hubisaa naftaada. Halkan ka sii akhri halkan www.canaryislandsinfo.co.uk/tenerife/places/los-cristianos/ . wixii macluumaad dheeraad ah ee la xidhiidha meelaynta.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Sambrook
Bilood 2 4 maalmood ka hor #1444 by Lingwell18
Ma aha inaad sameyso wax kale oo aan ahayn inaad raacdo tilmaamaha ku yaal shaashadda. Iskuday dib-u-xiridda Ma saxashay sanduuqyada toosan ee galka? Miyaad saxeexday FSX ama laga yaabo FSX uumiga halkii? Waxay ahayd rakibo fudud markii aan sidaas sameeyay. Uma aanan baahnayn inaan wax ku akhriyo wax isbaanish ah hubaal! lol. Kaliya isku day inaad dib u soo cusbooneysiiso oo raac tilmaamaha si taxadar leh
Bisha 1 3 todobaad ka hor #1448 by thaman22
tienes que mirar siempre las carpetas, y instalar n la biblioteca del FSX las carpetas que tenga muuqaalka y muuqaalka que tiene que estar dentro de canary part1 y canary part 2
sino el FSX no te las reconoce en el simulador
Bisha 1 3 todobaad ka hor #1449 by thaman22
waa inaad had iyo jeer fiirisaa faylalka, oo aad ku rakibtid gudaha FSX maktabadda faylalka faylalka leh muuqaallo iyo qaab dhismeed oo ay ku jiraan gudaha kanaalka1 iyo qaybta canary 2
laakiin FSX kuu aqoonsan maayo qalabka sameeyaha
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.605